लागूऔषधको हानि। मानव शरीरमा लागूऔषधको प्रभाव
यूफोरिया अभूतपूर्व ताकत, मूल विचार, शक्ति र ऊर्जा - यो सबै एक व्यक्ति ती वा अन्य लागूपदार्थ दिन सक्छन्। को lethargy र उदासीनता मा - तर, यूफोरिया चाँडै पारित हुनेछ, ताकत गंभीर थकान र शक्ति र ऊर्जा मा उत्तेजित गर्दछ। कसरी मानव शरीर मा दबाइहरु? केही अवस्थामा, नशीले पदार्थों को स्वागत भन्न? लागूऔषधको हानि के हो?
श्वसन, पाचन, स्नायु, हृदय, endocrine र अरूलाई - शरीर फन्दामा कुनै पनि पदार्थ, सबै मानव प्रणाली मा एक लाभदायक वा हानिकारक प्रभाव छ।
जब लागूऔषध प्रयोग केन्द्र दमन श्वसन लागि जिम्मेवार हुन्छ व्यक्ति को गतिविधि। फलस्वरूप, यस दुर्व्यसनी अक्सिजन अभाव, तर केही समय पछि त्यो पुरानो hypoxia विकास हुनेछ। सामान्यतया, शरीर पर्याप्त अक्सिजन अवशोषित सक्दैन जो सर्त, पुराना वा बिरामी मान्छे मा विकास। बाट hypoxia भविष्यमा प्रतिक्रिया ढिलाइ देखिने जो मस्तिष्क, मानसिक क्षमता र स्मृति मा एक महत्वपूर्ण कमी सहित सबै अङ्गहरू, असर गर्छ।
तर लागूऔषधको खतराबाट मात्र होइन hypoxia मा व्यक्त गरिएको छ। प्रायजसो, जो लागूपदार्थको प्रयोग मान्छे, अक्सिजन अनिकालबाट देखि, र श्वसन गिरफ्तारी देखि मर्न छैन। त्यसैले अल्पकालीन dizzying भावना र मानव जीवन को यूफोरिया छन्?
लागूऔषधको हानि पनि शरीर को एक सुरक्षा समारोह छ जो खोकी केन्द्र, लागू हुन्छ। एक सामान्य व्यक्ति एक खोकी बाहिर आउन हुनेछ पदार्थ - यस कारण, ज्योति दुर्व्यसनी मा कफ, पीप, खकार र माटो को एक संग्रह छ। प्रकाश दुर्व्यसनी - यो कहिल्यै बढ्दै, सौम्य राख्न, छ "cesspool।" जो तिनीहरूलाई यो मा विचार को निर्भरता प्राप्त गर्न भविष्यमा लागूपदार्थ प्रयास मानिसहरू को हुन्?
हृदय र जहाजहरु
श्वसन केन्द्र को निराशा र खोकी हुन्छ र थप रोग बाहेक vasomotor केन्द्र, जसद्वारा दुर्व्यसनी रक्तचाप घट्छ, र नाडी कम हुन जान्छ। एक मुख्य को हृदय को कार्य र रक्त नली - अक्सिजन र यी हटाउन संग Tissues र अङ्गहरूको आपूर्ति हानिकारक पदार्थ। तर, एक लागुपदार्थ दुर्व्यसनी, शरीर सफाई को सबै प्रक्रियाहरू slows तल। र शरीर मा कमजोर परिवर्तनहरू उपस्थिति थप जवान unsurprising वास्तवमा बन्नेछ।
दबाइ लत को नोक्सानी पक्कै परे छ ... अनि पाचन प्रणाली को मामला मा - यो एक पटक बस धूम्रपान गर्न, प्रयास गर्न निर्णय गर्ने मान्छे को सबै भन्दा वा सास prick गर्न भनेर ठूलो छ, तुरुन्तै तिनीहरूले थाह थियो भने, एउटा प्रयोग गर्न आफ्नो प्रयास वा अन्य लागूपदार्थ गर्न ड्रप भनी पर्खिरहेको। को दुर्व्यसनी खतरनाक कि - यो आंतों पर्खाल Atony। यो साँच्चै हो जस्तो खराब ध्वनि छैन। "Aton" - सामान्य टोन को कमी छ। र कारण भन्ने तथ्यलाई गर्न पाचन प्रणाली सामान्यतया कम छैन गर्न सक्छन्, दुर्व्यसनी आफूलाई मा, "मलको झोला संग" गर्दछ। दस दिनको लागि कब्जियत, को रगत मा अवशोषित र शरीर भर सर्छ छ केही जो मुख, को intestines, मल मा क्षय को प्रक्रियाहरु, देखि foul गन्ध ... त्यसैले सुखद के? को यूफोरिया लामो गएको छ, र क्याल थियो ...
लागूऔषधको नोक्सानी प्रजनन प्रणाली विस्तार। बाल-Freak - यो महिला लागूपदार्थ दुर्व्यसनी लागि के प्रतीक्षा छ, त्यो अचानक सबै बच्चाहरु छन् भने छक्क परे। एक Freak, उहाँले स्पष्ट हुनेछ स्वास्थ्य समस्या हुन एक बच्चा छ भने। र एक लागुपदार्थ दुर्व्यसनी बच्चाहरु हुन सक्छ कि?
सबै जस्तो देखिन्छ। अनिद्रा, विक्षेप, विभ्रम, भ्रम, बिगडा प्रतिरक्षा प्रणाली, आन्तरिक अङ्गहरूको इनकार debilitating, गंभीर निराशा, थकान: उदाहरणका लागि, हामी नोक्सानी amphetamine वर्णन। लागूपदार्थ निर्भरता - यो एक लामो र पीडादायी मृत्यु हो।
लक्षण र biliary पर्चा dyskinesia को नतिजा
Sergey Scheglov: काल्पनिक र विज्ञान कल्पना मिश्र धातु
Charismatic Martines जैतून: क्यारियर र प्रेम कथा
अवधारणा र अपराध को प्रकार। रूसी संघ को आपराधिक र प्रशासनिक कोड
Kayzer Vilgelm द्वितीय: तस्बिर र जीवनी